Ahoana ny fomba hanaovana fanadihadiana momba ny mpifaninana amin'ny famaritana ireo vinan'ny fananganana rohy | Martech Zone
Ahoana no ahitanao ny prospect backlink vaovao? Ny sasany aleony mitady tranokala amin'ny lohahevitra mitovy amin'izany. Ny sasany mitady ny lisitry ny lahatahiry sy ny sehatra web 2.0. Ary ny sasany mividy backlinks marobe fotsiny ary manantena ny tsara indrindra.
Saingy misy fomba iray hifehezana azy rehetra ary fikarohana ataon'ny mpifaninana io. Ireo tranonkala mifandraika amin'ireo mpifaninana aminao dia mety misy ifandraisany amin'ny lohahevitra. Inona koa, mety hisokatra amin'izy ireo izy ireo fiaraha-miasa backlink. Ary ny mpifaninana aminao dia nanao ny asa rehetra amin'ny fitadiavana azy ireo, ka ny hany ataonao dia ny manangona sy maka ny vinan'izy ireo ho anao.
Amin'ity torolàlana ity dia hianaranao ny fomba hahitana ny tena mpifaninana aminao, hahitanao ny backlink-n'izy ireo, ary indramina ireo manana ny fahaiza-manao avo indrindra.
1. Tadiavo ny tena mpifaninana aminao
Ny zavatra voalohany tokony hatao dia ny mamantatra hoe iza no tena mpifaninana amin'ny fikarohana ary misafidy izay tsara hitsikilo. Tsarovy fa ny mpifaninana amin'ny fikarohana dia tsy voatery hitovy amin'ireo mpifaninana amin'ny tena fiainana. Fa ireo kosa dia ireo tranonkala manana laharana ambony amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana anao (SERPs), izany hoe ny teny lakile ao amin'ny akany. Ity fikarohana ity dia afaka manampy anao hamaritra ihany koa ny teti-bola novinavinaina ny ho avinao fampielezan-kevitra amin'ny fananganana rohy.
Ny fomba tsotra indrindra hahitanao hoe iza ireo mpifaninana aminao manan-danja dia ny manoratra ny teny fanalahidy masonao ao amin'ny Google ary mahita izay domains miseho matetika ao amin'ny Google SERP. Ankehitriny, hahazo tranokala hafahafa ianao, toy ny Men's Health na Forbes na laharam-pahamehana hafa amin'ny magazine ho an'ny teny fanalahidy tena, fa, aorian'ny fikarohana vitsivitsy dia tokony hanana hevitra tsara ianao hoe iza no tena miasa ao amin'ny akany.
Mazava ho azy, ny googling ny teny fanalahidy voa rehetra sy ny fanoratana ireo tranokala izay mitana ny laharana ho an'ny ankamaroany dia tsy dia mandaitra. Soa ihany, famakafakana fifaninanana dia fanamby mahazatra ho an'ny SEO sy ny tompona tranonkala, noho izany dia maro ny fitaovana matihanina afaka manafaingana ny fizotrany. Raha efa mampiasa fitaovana SEO ianao, na Moz, Semrush, na Ahrefs, dia mety hisy endrika fikarohana ao anatiny ao anatiny. Miankina amin'ny fitaovana SEO ampiasainao, hahafahanao mamantatra ireo mpifaninana amin'ny fikarohanao na amin'ny lohahevitra na amin'ny sehatra, na indraindray izy roa.
Mba hamantarana ireo mpifaninana aminao amin'ny lohahevitra, mila miditra teny fanalahidy vitsivitsy ianao ary ny fitaovana dia hahita tranokala ambony voatanisa ho an'ireo teny fanalahidy ireo matetika. Ity fomba ity dia ahafahanao misafidy ny teny lakile ary mitady mpifaninana amin'ny akany tery.
Mamantatra ireo mpifaninana amin'ny sehatra, mila mandefa ny fonenanao ianao. Ny fitaovana dia mamakafaka ny teny lakile rehetra izay laharam-pahamehanao ary mahita tranokala manana ny teny fanalahidy lehibe indrindra. Ity fomba ity dia ahafahanao mahita tranokala mpifaninana izay mitovy indrindra amin'ny tranonkalanao manokana, na dia mety lehibe kokoa noho ny nokasainao aza ny akany.
Raha vantany vao azonao ny lisitry ny mpifaninana aminao, ny ankamaroan'ny fitaovana SEO dia mamela anao hanombatombana azy ireo amin'ny alàlan'ny fandrefesana metaly kalitao. Ny refy mahazatra indrindra dia misy ny fahefan'ny sehatra, ny fifamoivoizana organika ary ny isan-jaton'ny fihaonan-teny lakile, izany hoe mitovy amin'ny tranokalan'ny mpifaninana aminao. Ampiasao ireo metrika ireo mba hisafidianana mpifaninana dimy sy folo kalitao tsara hikaroka fikarohana backlink hafa.
2. Tadiavo ireo rohy afovoan'ny mpifaninana aminao
Raha vantany vao tonga miaraka amin'ny lisitry ny mpifaninana aminao indrindra ianao, dia afaka manadihady momba ny mombamomba azy ireo.
Ho an'ny fanamarinana haingana ny backlinks an'ny mpifaninana dia azonao ampiasaina izany fitaovana fanamarinana backlink. Soraty ny sehatry ny mpifaninana hahitanao ireo pejy marina izay mampifandray amin'ny tranokala, ny URL izay ampifandraisin'izy ireo, ny vatofantsika, ny laharan'ny sehatra, na dofollow na tsia ny rohy iray:
Raha te-hanao fikarohana lalindalina kokoa momba ny backlinks an'ny mpifaninana ianao dia mila mampiasa rindrambaiko SEO matihanina. Fitaovana fandinihana mpifaninana natokana ho anao dia hamela anao hikaroka mpifaninana marobe indray mandeha, ary koa sivana hita amin'ny alàlan'ny fahefana, toerana, tag nofollow, risika sazy ary masontsivana hafa:
Azo lazaina fa ny iray amin'ireo fiasa tsara indrindra amin'ny fikarohana backlink dia rehefa afaka mahita ireo tranonkala mifandraika amin'ny roa na mihoatra amin'ireo mpifaninana aminao ianao. Ireo tranokala ireo no laharam-pahamehana hataonao lohalaharana lohalaharana - mety hiasa ao anaty ny akany izy ireo ary tsy dia hanana fiaraha-miasa manokana amin'ireo mpifaninana aminao.
3. Safidio ny Prospect Backlink matanjaka indrindra
Raha vantany vao nosintominao ny lisitr'ireo backlinks nataon'ny mpifaninana aminao, dia mety hanana tranokala an'arivony an'arivony indraindray ianao. Izay mazava ho azy fa be loatra ka tsy afaka manao fampielezan-kevitra mahomby. Ankoatr'izay, ny fanaovana kopia an-jambany ny prospect backlink rehetra an'ny mpifaninana aminao dia tsy ny tetika tsara indrindra, satria ny sasany amin'izy ireo dia mety manolotra rindran-damina ambany kalitao izay hanimba ny SEO anao fotsiny.
Mba hanafohezana ny lisitry ny vinavinanao backlink mankany amin'ny habe azo tantanana dia mila ariana ireo tranokala manome backlinks ambany kalitao. Ny antony mahazatra indrindra izay manondro ny kalitaon'ny prospect backlink dia ahitana:
Fahefana domain. Arakaraka ny maha avo azy no tsara kokoa. Ny domains manana fahefana avo lenta dia ireo tranonkala izay manana backlinks be dia be, atiny avo lenta ary traikefa tsara ho an'ny mpampiasa, ary noho izany dia mandalo fahefana bebe kokoa amin'ny rohy misy azy ireo.
Dofollow / nofollow. Tsy toy ny rohy nofollow, ny rohy dofollow dia afaka mandefa ranona rohy mankany amin'ny pejin-dry zareo. Ny rohy Nofollow dia tsy very maina, fa tsy mandray anjara amin'ny filaharanao. Tsy maninona ny manana rohy nofollow ao amin'ny mombamomba anao, saingy tsy tokony holaninao ny fanananao hahazoana bebe kokoa amin'izy ireo.
Mifampitohy ny rohy. Araka ny efa voalaza, ny domains mifandraika amin'ny roa na roa amin'ireo mpifaninana aminao dia sarobidy indrindra toy ny prospect backlink.
Loza amin'ny sazy. Ny rohy izay avy amin'ny tranokala maloka misy atiny manify na tsy misy dikany, doka an-taonina ary fanandramana ratsy ataon'ny mpampiasa dia mety hampidina anao anaty rano mafana miaraka amin'i Google.
Miankina amin'ny fitaovana SEO nampiasanao hanangonana ny vinavinam-pirinty, azonao atao ny mampiasa ny sasany amin'ireto masontsivana etsy ambony ireto hanivanana ny lisitry ny rohy. Raiso ohatra i Moz DA ho an'ny fahefana domain, Scam Scam, ary Ireo tranokala mifampitohy:
Fitaovana SEO hafa dia mety manana metrika samihafa na anarana samy hafa amin'ny refy iray ihany, fa ny fizotrany dia mitovy ihany. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao hoe inona ny tokonam-baravaranao (oh: fahefana an-tranonkala> 60; risika sazy> 50) ary sivanio araka izany ny fanantenanao. Ampifanaraho ny fametrahana anao mandra-pahatonga anao ho sisa velona amin'ny fanantenana ary ity no lisitra fohy.
4. Atombohy ny fampielezana fanentanana
Ankehitriny manana lisitra fohy amin'ireo vinavinam-pototra avo lenta ianao, tonga ny fotoana hahitana hoe iza amin'izy ireo no vonona handray ny backlinks anao.
Ny dingana voalohany amin'ny fampielezan-kevitrao amin'ny fanentanana dia ny fizarana ny vinavinanao ho fizarana miavaka ary misafidy fomba mety hananganana fifandraisana amin'ny sehatra tsirairay. Sokafy ny pejy nofidinao ho an'ny lisitra fohy anao ary zahao hoe aiza marina no apetraka ireo rohy miverina amin'ny pejy. Ampifanaraho ny tontolon'ny backlink.
Ireto misy ohatra momba ny mety ho endrik'ireo toe-javatra backlink:
tapakila amin'ny tranonkala;
Raha mampiasa rindrambaiko fanoloran-tena voatokana ianao dia mety ho azonao atao ny manisy marika ny vinavinanao eo. Raha tsy izany dia adikao amin'ny takelaka Excel ireo domina misy ny prospect backlink, ary asio marika ireo sokajy ao amin'ny tsanganana manaraka:
Azonao atao ny manasokajy ny vinavinanao ho sokajy, mahita ny mombamomba ny fifandraisana ary manomboka ny fitorianao. Safidio ny mailaka modely arakaraka ny karazana fanantenana, ary lazao mivantana izay angatahinao, ary inona no hatolonao ho takalony.
Aza adino ny manao ny hafatra momba ny fanentanana nataonao ho personalize. Tsy tian'ny olona ny litera toy ny bot, ary matetika mamafa azy ireo nefa tsy mamaky.
Fanamarihana: Ny famotopotorana ny vinavinanao dia manome anao fotoana hafa hijerena ny tranonkalany momba ny maha-zava-dehibe azy sy ny kalitaony ary manaisotra ireo vinavina sasany ao amin'ilay lisitra. Ary koa, raha hitanao fa ny sasany amin'ireo tranonkala dia lahatahiry orinasa, tranokala web 2.0, na toerana hafa ahafahanao mamorona atiny dia tsy ilaina ny manatona azy ireo. Afindra amin'ny lisitra hafa izy ireo ary apetraho amin'ny alàlan'izay endrika ilaina ny backlinks anao.
5. Araho maso ny mombamomba anao Backlink
Ny fanaraha-maso ny tantaranao backlink dia hamela anao hahita raha toa ka nanao fanovana teo amin'ny toerana misy anao ny rohy vaovao, jereo raha misy tsy mety, ary hadihadio izay olana mety hitranga.
Fipoahana tampoka backlinks ambany kalitao dia iray amin'ireo zavatra mety mitaky ny sainao. Mety ho a fanafihana SEO ratsy avy amin'ny iray amin'ireo mpifaninana aminao, na mety hiseho ara-organika ireo rohy, na mety ny masoivohon'ny SEO anao mividy rohy ambany kalitao ho an'ny tranonkalanao. Na inona na inona antony, fiakarana tampoka amin'ny rohy spammy dia mety hisarika ny sain'i Google ary hahazo sazy anao. Ary ny fahasitranana amin'ny sazy toy izany dia mety maharitra amam-bolana maro ka, tsia.
Raha mahita fitomboana mampiahiahy momba ny isan'ny backlinks ao amin'ny tranonkalanao ianao dia alao antoka fa hanadihady raha tsara na ratsy ireo rohy ireo ary avy aiza izy ireo. Raha ratsy ny rohy dia manandrama mifandray amin'ireo tompona tranokala ary angataho izy ireo hanala na farafaharatsiny nofollow ireo rohy. Raha tsy vita io dia afaka mampiasa Fitaovana disavow an'ny Google hilaza amin'i Google fa tsy nifandray tamin'izy ireo ianao.
Fidinana tampoka amin'ny backlinks avo lenta zavatra hafa mety mitaky ny sainao. Mety hitranga izany satria nifindra tamin'ny URL hafa ny pejy mampifandray, voafafa, niova ny atin'ny pejy, na ny backlink dia nesorina na nosoloina rohy mankany amin'ny mpifaninana aminao. Amin'ity tranga ity dia mila mifandray amin'ny mpiara-miombon'antoka backlink ianao raha hijery ny zava-nitranga ary hamerina amin'ny laoniny ny backlink raha azo atao.
Aza adino ny manara-maso ireo mombamomba ireo mpifaninana aminao koa. Tandremo ny fiakaran'ny vidin'ny backlink tampoka teo. Raha misy dia zahao izay niavian'izy ireo. Raha toa ka azo itokisana ilay vinavina vaovao dia diniho koa ny ampidiro azy io amin'ny fanentanana anao.
Ny famakafakana fifaninanana no fomba mahomby indrindra hahitana ny prospect backlink tsara. Tsy misy fomba hafa tsotra fotsiny afaka manome an'ity haavo misy ifandraisany ity. Ary mafana ihany koa ny fitarihana, satria efa nahavita nametraka ny backlink-n'izy ireo ny mpifaninana aminao. azo antoka fa toerana hanombohana ny fananganana ny backlinks anao na zavatra hanandramana raha mbola tsy nanandrana azy ianao teo aloha.
Tags: famakafakana backlinkfanadihadiana ny mpifaninana backlinkfanentanana backlinkfiaraha-miasa backlinkfanovana rohyfamakafakana mpifaninanafananganana rohyfampielezan-kevitra amin'ny fananganana rohyfanentanana fananganana rohylinkassistantfikarohana biolojikafikarohana Optimizationseo famakafakanaseo powersuite